Kismaayo News » FIIDSOOH: Biyo iyo Maal
FIIDSOOH: Biyo iyo Maal
Kn: Gobolka Shabeelada Hoose waxaa ka taagan xiisad culus oo cirka isku sii shareereysa oo u dhaxaysa beelo halkaasi ku wada sugan, iyada mid ka mid ah beelaha ay ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah beesha kale ee ay is hayaan.
Waxa ugu weyn ee la’isku hayo waa biyaha wabiga iyo hantida (maalka) ama kheeyraadka u gobolkaasi leeyahay. layaabna maba ahan in mar biyaha lagu miismiisi jirey Shabeelada Hoose iyaga oo iib ah, sababtoo ah waa badeeco qaali ah sida wabiga Niilka oo kale.
Waxaa jira tuhun xoogan oo dowladda laga qabo in ay la kala safantahay beelaha, islamarkaasina hub iyo ciidan iyo xilalba siisey mid ka mid ah beelaha.
Marka laga yimaado halista ka dhalan karta muranka beelaha, halista ugu weyn waxa ay tahay kalsoonidii dowladda lagu qabay oo meesha kasii baxaysa, taasina ay wiiqeyso ama ragaadineyso dagaalkii lagula jirey xoogaga falaagada ee dowladda kasoo horjeeda.
Sidii dhacday markii ay taagneyd xiisaddii Jubbland, waxaa arin fool xumo ah in dowladda ay iska indha tirto dhibaato ama qalalaase saansaantiisa muuqato, hadhoow markii xeero iyo faldhaal kala dhacaan kusoo baraarugto meel aanan waxbo laga qaban karin.
Cid gar leh iyo cid aan lahayn ba waa in dowladda marka hore lasoo noqotaa kalsoonidii dadka ku qabeen, iyada oo taasi u maraysa in ay dhexdhexaad ka noqoto waxa dhacaya, islamarkaasina ciidamadda dowladda ee gobolka ku sugan si siman ama ciidamo isku dhaf ah la geeyo gobolka.
Talaabada xigta waxa ay noqoneysaa dhexdhexaadin daacad ah oo laga dhex sameeyo beelaha, iyada oo beel kasta la xusuusinayo sida ay muhiimka u tahay in si nabad galyo ah loo wada noolaan lahaa.
Arrinta ugu muhiimsan waxa ay tahay in dowladda ay xakamayso hadalada saxaafadda laga sheegayo ee kicinta ah, gaar ahaan dadka dowladda ku jira ee xildhibaanada ah iyo kuwa hogaamiye dhaqameedyadda ah.
Waxay u egtahay in markii gobol xiisadiisa ay danto, gobol kale ay xiisad ka kacayso, sidaasi darteed waa in dowladdu ku baraarugtaa arrinkaasi, wixii ka hortagna samaysaa.
Beelaha la dulmiyey waa muhiim in cadaalad loo falaa ka hor inta aanan la sugin inta ay kacayaan oo ay hubka qaadanayaan, cadaaladana waa in ay ka bilaabataa dowladda xaqa ay beeshaasi ku leedahay in aanan la duudsiinin, sida shaqaaleynta.
Ugu dambeyntii waa in la helaa guddi heer qaran oo ka kooban odayaal sumcad bulshada ku dhex leh oo nabadda ka taliya iyo culumo, kuwaasi oo heegan u ahaada xalinta khilaafaadka.